Azov सागर: तट, विशेषताहरु, सुविधाहरू
को समशीतोष्ण कन्टिनेन्टल क्षेत्र (steppe र वन steppe क्षेत्र) दक्षिणी युक्रेनको पश्चिमी रूस र Crimean प्रायद्वीप को उत्तरी भाग बीच मा युरोप को पूर्वी भाग मा घर Azov सागर छ। कोस्ट, वा यसको भाग बरु, सबै माथि देशहरूमा लागू हुन्छ। किनभने यो स्थान को यो अटलांटिक महासागर को एक "बन्द" समुद्र भनिन्छ। यसको पानी धेरै न्यानो र नुनीन छन्। यो कारक पर्यटकहरुका लागि महत्वपूर्ण छ। यसलाई पर्यटक धेरै यहाँ, विशेष गरी बच्चाहरु संग, एकदम किनारमा नजिकै शान्त र खोक्रो समुद्र रूपमा आउँछ। एक रोचक तथ्य तट मा जहाँ तपाईं नगरेसम्म 0.5 मिटर गहिराइमा पुग्न केही मिटर हिंड्न छ तटों छन् भन्ने छ।
सानो पोखरी रूसी संघ स्वामित्वमा बाँकी संग तुलना, Azov समुद्रको छलफल। तट मात्र 1472 किलोमिटर को एक लम्बाइ छ। गहिराई, औसत सन्दर्भमा - 8 मिटर, तर त्यहाँ केही क्षेत्रमा छन्, तल स्तर 14 मिटर को स्तरमा कम छ।
Azov सागर अटलांटिक महासागर बेसिन पर्छ। तर, आफ्नो बाटो एकदम रोचक छ। पहिलो, काला सागर, को Bosphorus र भू-मध्य मार्फत चलाउन यसको पानी। र मात्र पछि तिनीहरूले अटलांटिक महासागर मा गिरावट।
Azov समुद्रको सुविधाहरू
Unsalted, खोक्रो र न्यानो - यी शब्दहरू पूर्ण Azov समुद्रको वर्णन। तट ठीक बालुवा र coquina ढाकिएको छ। समुद्र रासायनिक तत्व को एक ठूलो रकम समावेश गर्छ, त्यसैले यो औषधीय उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। समुद्र छालहरू बालुवा समुद्र तट धुन, यो पनि केही अद्वितीय सुविधाहरू छ। शायद धेरै धेरै घण्टा पानी नजिकै बस सुत्न गर्नुभएको छ, र पछाडि मा बेचैनी, मांसपेशिहरु आफूलाई छन्। एक चिकित्सा रूपमा मानव शरीर मा यहाँ सबै कार्यहरू, र विशेष उपयोगी माध्यम: निष्कर्ष स्पष्ट छ।
युक्रेन र रूस भौगोलिक Azov समुद्रको धेरै भागमा विभाजित छन्। कोस्ट प्रत्येक राज्य र वरपरको भूमि एक बन्द क्षेत्र, अन्य देशहरूमा जहाज समावेश जहाँ छैन हुन सक्छ छ।
रूस र स्वतन्त्र राज्य को युक्रेन सम्पूर्ण अस्तित्व समयमा तिनीहरूले अनुकूल सर्तहरू थिए। यसलाई त्यसैले स्वामित्व को समुद्र स्थापित छैन स्पष्ट सीमा पानी expanse छ। तर, 2014 देखि सबै मौलिक परिवर्तन भएको छ। अब यी राज्य आपसमा शत्रुतापूर्ण, त्यसैले यसको स्थिति सकेसम्म धेरै मजबूत प्रयास गर्नुहोस्।
वनस्पति र जीव
ठाडो चूना पहिरो, रक ढलान - मा त पहिलो नजर Azov समुद्रको जस्तो देखिन्छ। युक्रेन को समुद्र तट तथापि, रूसी संघ को भाग रूपमा, बिरुवाहरु को बाक्लो thickets संग कुनै फरक छ। यहाँ तपाईँले एकल elderberry ब्रश, thorns, फर्न, arum पूरा गर्न सक्छन्। पानी नजिक, वनस्पति नुन गर्न प्रतिरोधी हो कि मात्र प्रजाति प्रतिनिधित्व छ। , चट्टानको बारेमा मार नुन पानी तिनीहरूलाई खन्याउन, एक लहर: यो एकदम बस बताए गर्न सकिन्छ। यो herbaceous यस्तो puccinellia र Limonium रूपमा बिरुवाहरु। र पहिले नै यो तपाईं शैवाल रातो र हरियो रंग, पानी रंग देख्न सक्नुहुन्छ पानी छ।
को Fauna पनि धेरै धनी छ: कलहंस, बतख, steppe sandpipers, lapwings, रातो-breasted कलहंस, म्युट swans, curlew, gull-खुट्टे र Chernogolovka। मा समुद्र तट कहिले काँही कछुवा, भ्यागुतो, र क्यान्सर देख्न सकिन्छ।
Azov को समुद्र को पानी विश्व माछा को 80 प्रजाति राख्छ। सबैभन्दा प्राय सामना - sturgeon, Gar, sturgeon, माछा, ठूलो flounder, rybinets, mullet, whitebait, anchovies र समुद्र तिल।
औसत वार्षिक मिलिमिटरमा मा दक्षिणी युक्रेन र वर्षा, 250 देखि 500. रूपमा गर्न को क्रिमीआ को जलवायु शुष्क छ, यो adversely को Azov सागर को तट असर गर्छ। को +23 जुलाई मा औसत तापमान0+30 सी गर्न; को हिउँदमा तापक्रम (जनवरी) -20+7 सी
Azov तट निहित चिसो तर संक्षिप्त जाडोयाम र न्यानो गर्मीयाम। हावा तापमान समान वितरण गरिएको छ। यी महिनामा सुखद मौसम द्वारा लागि वसन्त र शरद ऋतु विशेषता छन् थर्मामीटर9देखि देखाउन +130सी गर्न, हावा उच्च आर्द्रता लाग्यो। गर्मी देखि जाडो गर्न संक्रमण धमिलो।
सबैभन्दा लोकप्रिय छुट्टी गन्तव्यहरू एक Azov समुद्रको छ। रूस र युक्रेन को तट धेरै पेंशन रोजगारी प्रदान गर्दछ। तिनीहरूलाई साँच्चै विशाल छ सूची। यो पर्यटक सहर, मनोरञ्जन केन्द्र, होटल, कटेज घरहरू र यति मा। साथै, त्यहाँ क्याफे र रेस्टुरेन्ट, vacationers खान भनेर सक्नुहुन्छ, वा रमाइलो छन्। हामी छोराछोरी, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एक छुट्टी बारेमा कुरा गर्दै छन् भने - यो फरक आकार, dolphinarium, मनोरञ्जन पार्क, circuses को स्लाइडहरू संग आधुनिक स्विमिंग पूल खुलेको छ।
को Azov समुद्र तट को मुख्य समस्या - लगभग सबै क्षेत्रमा विभिन्न कम्पनीहरु द्वारा प्रदूषित छ। जहाज, डुङ्गा अन्य उपकरण को एक ठूलो संख्या समुद्रको दूषण गर्न नेतृत्व गरेका छन्। धेरै मनोरञ्जनको तटरेखा मा उपस्थिति छ कि यो बिस्तारै विशेष गरी सार्वजनिक तटों क्षेत्रमा एक डम्प मा मोड़ तथ्यलाई तिर जान्छ। बन्द क्षेत्रमा धेरै राम्रो। तर, बाँकी लागि तिनीहरूले पैसा एक धेरै राशि तिर्न छ।
Azov समुद्रको मा आराम
को Azov समुद्र तट तल, यी ठाउँहरूमा भएको जो कहिल्यै ती लागि सांस्कृतिक छुट्टी प्रस्ताव सबै शहर र सहर देखाउँदछ नक्सा, संग लाइन छ। र यो एकदम राम्रो विकास भएको छ यहाँ टिप्पण लायक छ।
सुन्दर दृश्यहरु र न्यानो पानी धेरै पर्यटकहरु आकर्षित। सेवाहरूको एक विविध दायरा:। पैदल, चिकित्सकीय माटोको स्नान, आदि विशाल स्लाइडहरू संग पूल को एक ठूलो संख्या सबै जवान मान्छे (र मात्र) छोराछोरीलाई पाँच वर्ष पुरानो संग शुरू र मान्छे पचास वर्ष समाप्त आकर्षित गर्छ। सबै बाट साना ठूलो गर्न, कम्तिमा एक पटक आफ्नो जीवनमा यो "आकर्षण" र अविस्मरणीय अनुभव भ्रमण गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
एथेन्स को Acropolis: परिसर इतिहास र समीक्षा एक संक्षिप्त विवरण। एथेन्स को Acropolis: वास्तुकला, एथेन्स स्मारकों
Stary Oskol: ठाँउहरु। Stary चिडियाघर। शासकलाई काठ
Konstantin Sergeevich Novosolov: जीवनी, वैज्ञानिक र सामाजिक गतिविधिहरु, पुरस्कार र पुरस्कार। भौतिकशास्त्र मा नोबेल पुरस्कार (2010)
होर्टन रोग: कारण, लक्षण, निदान र उपचार
औषधि "Pantogam": प्रयोगको लागि निर्देशन
एक hijra के हो? मुस्लिम लागि A.H. मूल्य
सकारात्मक Ovulation परीक्षण - यो क्षण सम्झना छैन
Polyps - सौम्य छ? हामी सँगै छानबीन
आज्ञाकारी के हो? गुम्बामा मा आज्ञाकारी। शब्द को अर्थ "आज्ञाकारी"